HTC U12 +: Design na nkọwapụta leaked tupu ngosi | Gam akporosis
HTC bụ otu n'ime ụdị ndị ahụ na-efunahụ ọnụnọ ahịa karịa oge. Ọ bụ ezie na nhapụ ha na-ewepụta mmasị mgbe niile. Lọ ọrụ ahụ kwupụtara izu ole na ole gara aga na ngosipụta nke ọhụụ ọhụrụ ya, HTC U12 +, maka May 23. Ma otu izu mgbe ngosi nke ekwentị, ya ụdịdị e kpamkpam leaked.
Ya mere, HTC U12 + a anaghịzi edobere anyị ihe nzuzo ọ bụla. Ọzọkwa, e mekwara atụmatụ nke ekwentị. Site na ihe anyị nwere ike ịhụ ma ọ bụrụ na akara Taiwan ahọrọla ịgbaso usoro ahịa ma ọ bụ. Kedu ihe na-echere anyị n'okwu a?
Dị nwere ihe ijuanya site na ịkụ nzọ na ekwentị nke na-agaghị enwe ọkwa na ihuenyo ahụ. Ihe dịịrị ọtụtụ ndị ọrụ bụ ezigbo akụkọ, ebe ọ bụ na ọkwa ama ama ama na gam akporo. Ma anyị agaghị ahụ ya na HTC U12 + a.
Ke ofụri ofụri anyị pụrụ ịhụ na ọ bụ a elu mma nso na okwu nke nkọwa. Akwụkwọ data zuru ezu nke nkọwapụta nke ngwaọrụ dị ka ndị a:
Ihuenyo: 6 sentimita asatọ na mkpebi QuadHD + na 18: 9 SuperLCD 6 ruru, Gorilla Glass, HDR10
Nhazi: Snapdragon 845
Nchekwa ime: 64/128 GB (gbasaa na microSD)
Batrị: 3.500 mAh + Ndenye Ọcha 3.0
Rear igwefoto: 12MP Ultrapixel, 1.4um, f / 1.75 + 16MP, f / 2.6 OIS, eserese eserese, dualLED, akwụkwọ mmado AR, vidiyo 4K, nwayọ nwayọ 1080p / 240fps
Igwefoto n'ihu: Dual 8MP, f / 2.0, 84º, eserese mode, HDR
Akụkụ: 156.6 x 74.9 x 8.7 mm
Ibu ibu: 188 g
ndị ọzọ: Bluetooth 5.0, IP68 mmiri na-eguzogide, aptX, LDAC, Edge Sense, ụdị USB C, HTC USonic
N'ozuzu anyị hụrụ na HTC U12 + kwere nkwa ịbụ ezigbo ihe nlereanya. Ọ nwere ihe nhazi dị ike, kamera ahụ kwere nkwa na ha ga-enwe ike iwere onyonyo dị egwu ma n'ozuzu ha, a na-atụ anya nnukwu arụmọrụ.
Ihe nwute bụ na ihe a na-emebu bụ na ekwentị ndị ahụ anaghị ere nke ọma. Karịsịa n'ihi ụgwọ ya dị elu na nkesa na-adịghị mma. Na Mee 23 anyị ga-enwe ike ịwepụ obi abụọ ma anyị ga-ahụ ihe akara ahụ kwadebere maka anyị maka afọ a
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » HTC U12 + agbaala kpamkpam
ASUS Zenfone Live L1: ụdị ọkwa ọhụụ ọhụrụ ahụ